Difference between revisions of "Zex Manatsa"
Zex Manatsa is a retired male Zimbabwean singer, songwriter, and bass player. He rose to prominence in the 1970s with his band, [[The Green Arrows]], which he started in [[Mhangura, Zimbabwe]] in 1968<ref>[http://www.manatsamusic.com/about-us/]</ref>. In the 1970s and 80s, Zex released many tracks which have proved to be all-time hits such as “Chipo Chiroorwa”, “Bambo Mwakwatila”, “Vaparidzi Vawanda”, “Mwana Waenda”, “Chechule Anavala Bottom”, and “Chimwamuna Chamimba”
Zex Manatsa is a retired male Zimbabwean singer, songwriter, and bass player. He rose to prominence in the 1970s with his band, [[The Green Arrows]], which he started in [[Mhangura, Zimbabwe]] in 1968<ref>[http://www.manatsamusic.com/about-us/ About Manatsa Music]</ref>. In the 1970s and 80s, Zex released many tracks which have proved to be all-time hits such as “Chipo Chiroorwa”, “Bambo Mwakwatila”, “Vaparidzi Vawanda”, “Mwana Waenda”, “Chechule Anavala Bottom”, and “Chimwamuna Chamimba”
↑ About Manatsa Music
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Zex_Manatsa&oldid=692"
This page was last edited on 9 March 2014, at 13:33.